डा भक्तमान श्रेष्ठ विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाई सुरु – Saurahaonline.com
डा भक्तमान श्रेष्ठ विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाई सुरु
चितवन,२३ माघ। चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका तत्कालिन अध्यक्ष डा भक्तमान श्रेष्ठ विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ फागुन २ गते डा श्रेष्ठ विरुद्ध १ करोड ६७ लाख ५७ हजार १ सय १३ रुपैयाँ सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको भन्दै अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोमबार डा. श्रेष्ठको मुद्दा न्यायाधीशहरु रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो । इजलाशले अन्तिम सुनुवाईका लागि थप फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष रहँदा श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दावी गरिएको छ । डा श्रेष्ठले अस्पतालको सेवा प्रवेश गरेदेखि नै सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेबारी दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा धन आर्जन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा आयोगको ऐन, २०४८ को दफा २९ बमोजिम जफत गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्न आरोपत्रपमा माग गरिएको छ । अख्तियारले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती शिलु श्रेष्ठको नाममा समेत राखेको भन्दै उनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाईएको थियो । डा. श्रेष्ठ क्यान्सर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा २०५४ सालमा सेवा प्रवेश गरी १८ वर्ष सोही स्थानमा विताएका थिए। क्यान्सर विशेषज्ञ श्रेष्ठ २०६४ भदौदेखि २०६७ सालसम्म क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । २०६३ देखि २०६५ सालसम्म उनले १५ लाख २७ हजार रूपैयाँ आर्जन गरेकोमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा ३ वर्षको अवधिमै ५० लाख अवैध ढंगले कमाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठको नाममा विभिन्न बैंकमा १३ वटा खाता रहेको अख्तियार को आरोपत्रमा उल्लेख छ । उनले घर निर्माणमा कुल ४४ लाख ५४ हजार र जग्गामा ६५ लाख ८५ हजार खर्चेको भेटिएको अख्तियारको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । २०६९ भदौमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेपछि श्रेष्ठले ९४ लाख ३१ हजार गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियार आरोप पत्रमा उल्लेख छ । क्यान्सर अस्पतालमै फुड एन्ड न्युट्रिसन अफिसरका रूपमा कार्यरत श्रेष्ठकी पत्नी शिलुलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । श्रेष्ठको चितवनकै अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु एनपीआई सामुदायिक अस्पताल, चितवन अस्पताल प्रालि र नेपाल पोलिटेक्निकल इस्टिच्युटमा सेयर रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी, तानातानमा सांसद २०७७, १५ फाल्गुन शनिबार
कानो :नाइजेरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रबाट एक सशस्त्र समूहले शुक्रबार ३ सय १७ विद्यार्थीलाई अपहरण गरेको.....